Dalxiiska Kaariibiyaanka oo sifiican looga Filayo Safarka Xagaaga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » Dalxiiska Kaariibiyaanka oo sifiican looga Filayo Safarka Xagaaga
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xogta ka timid dalalka xubnaha ka ah Ururka Dalxiiska Kariibiyaanka ayaa soo jeedinaya in dib loo rogo slide oo bilaabatay dhammaadka Maarso 2020.
Wadamada CTO waxay si hagar la'aan ah uga shaqeeyeen sidii loo xakameyn lahaa coronavirus -ka oo dib loogu furi lahaa dhaqaalahooda.
Kariibiyaanka waxay bilaabayaan inay dib u rogaan riixitaankii bilaabmay dhammaadkii Maarso 2020.
Waxaa jira caddaymo isa soo taraya oo sheegaya in dalabka soo go'a uu dib u guuxayo waqti hore iyo si ka dhakhso badan sidii la saadaaliyay.
Iyada oo uu socdo xilli ciyaareedkii xagaaga ee 2021-ka, waxaa suuqa ka jira caddaymo sii kordhaya oo sheegaya in dalabka soo-baxa uu dib u guuxayo waqti hore iyo si ka dhakhso badan sidii ay saadaaliyeyaasha saadaaliyeen. Isla mar ahaantaana, the Ururka Dalxiiska Karibiyaanka (CTO) waxaa dhiirrigeliyay xogta ka timid waddammada xubnaha ka ah, kuwaas oo si hagar la'aan ah uga shaqeeyay xakameynta coronavirus iyo dib u furista dhaqaalahooda.
In kasta oo dusha sare ah, boqolkiiba 60 hoos u dhacday rubucii hore ee 2021, marka la barbardhigo isla muddadii sanadkii hore, ayaa laga yaabaa inaysan u muuqan dhiirigelin, baaritaan dhow ayaa soo jeedin doona in Kariibiyaanka ay bilaabayaan inay dib u rogaan rooggii bilaabmay dhammaadkii Maarso 2020.
Tan waxaa lagu muujiyey hoos u dhac ku yimid heerarka hoos u dhaca kaas oo Kariibiyaanka duubayey shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay. Rubucii koowaad ee 2020 wuxuu ahaa xilligii ugu dambeeyay ee heerarka caadiga ah ee socdaalka, markii 7.3 milyan oo booqdeyaal caalami ah oo habeen habeen ah (imaatinka dalxiiska) ay booqdeen gobolka. Bilihii Janaayo iyo Febraayo 2021, imaanshayaasha gobolka ayaa hoos u dhacay in ka badan 71 boqolkiiba marka la barbardhigo isla labadii bilood ee sanadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, hoos u dhaca boqolkiiba 16.5 ee bishii Maarj 2021 marka la barbar dhigo Maarso 2020 ayaa calaamad u ah heerka dib -u -noqoshada isbeddelka tirada dadka imaan doona dalxiiska.
Xogta laga soo ururiyey laba iyo toban meelood oo ka warbixinaya imaatinka dalxiisayaasha Abriil 2021 waxay muujineysaa in mid kasta oo ka mid ah meelahan ay kor u diiwaangashan tahay koror, marka la barbar dhigo Abriil 2020, markii dhaqdhaqaaqa dalxiiska la yareeyay adduunka. Sidoo kale, imaatinka dalxiisayaasha ayaa dib ugu soo laabtay goobihii laga soo sheegay xogta May. Si kastaba ha ahaatee, waa in la tilmaamaa, in tirada booqdayaasha joogitaanka ah ay weli ka hooseeyaan heerarka u dhigma ee 2019.
Hadalladii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen ciyaartoy muhiim u ah duulista hawada kuwaas oo Kariibiyaanka ay u yihiin suuq muhiim ah, ayaa dhiirigelin lahaa. Intii lagu gudajiray taxaneheenii dhowaan ee wada -xaajoodka khadka tooska ah, labadaba Maamulaha British Airways, Sean Doyle, iyo VP ee iibinta Kariibiyaanka ee American Airlines, Christine Valls, ayaa ka hadashay xiisaha sare ee safarka gobolka. Dhab ahaantii, Ms. Valls waxay tilmaamtay in Kariibiyaanka ay ku soo boodday American Airlines, iyadoo celcelis ahaan boqolkiiba 60 culeyska culeyska dabayaaqadii May 2021, iyo in shirkaddu qorshaysay inay duullimaadyo maalinle ah ku aaddo gobolka xagaagan marka loo eego sanadkii 2019 . American Airlines ayaa usheegtay CTO toddobaadkan inay shan waddo oo cusub ku soo biirisay Kariibiyaanka xagaagan, iyadoo lixaadna lagu dari doono bisha Nofeembar - waxayna u adeegi doontaa 35 goobood oo ku yaal Kariibiyaanka.
Iyada oo lagu saleynayo tilmaamayaashaan, CTO waxaa si aad ah loo sugaa rajada safarka xagaaga, iyo inta ka hartay sanadka ilaa 2022.
Waxaa la aqoonsaday in rajo kasta oo la rabo in la xakameeyo xaqiiqda ah in kiisaska cusub ee COVID-19 ay si xawli ah ugu soo kordhayaan UK iyo Mareykanka labadaba, oo ah labada suuq ee ugu weyn Kariibiyaanka. Kuwani waa calaamado muujinaya in fayrasku weli yahay halis weyn oo si dhakhso ah u beddeli kara horumar kasta oo aan samaynay.